Garbahaareey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Garbahaareey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Garbahaareey oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenkii Tobnaad ee tartan cilmiyeedka Warbaabinta Qaranka ee uu taabagelinayo maamulka gobolka Benaadir, waxaa ku tartamay degmooyinka Hodan oo ka tirsan gobolka Benaadir iyo Garbahaareey oo ka tirsan Gedo.
Degmooyinka Hodan iyo Garbahaareey, waxaa la weydiiyey toddobadii su’aal ee xaqa ay u lahaayeen, iyadoo qeybta hore lagu kala nastay bar-bar dhac afar, dhibcood ah, waxaana kaddib la soo gudbiyey warbixinnadii ka hadlayey taariikhda labada degmo., guddiga ayaa sheegay in natiijada ka hor loo baahan yahay su’aallo dheeri ah si ay u kala baxaan labada degmo.
Natiijada Guddiga ee Hodan
Degmada Hodan ee gobolka Benaadir, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabbeen laba su’aal shan waa ay iska qaldeen, iyagoo uruursadey afar dhbcood (4 dhibcood).
Degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo, waxaa la weydiiyey toddoba iyaguna, six ah wax ay uga jawaabbeen saddex su’aal, sidaas ayeey ku heleen Lix dhibcood (6 dhibcood), Garbahaareey ayaana u gudubtay wareegga labaad ee tartan Cilmiyeedka warbaahinta Qaranka.
Habeen dambe waxaa tartami doona degmooyinka Garoowe caasimadda gobolka Nugaal iyo degmada Hiliwaa ee gobolka Benaadir.
Previous articleWasiir Yariisoow oo heshiis la gaaray dhiggiisa Uganda
Next articleMadaxweynah Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta booqanayo Magaaladda Kismaayo.